Degso PUBG loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (1945.60 MB)
Soo Degso PUBG
PUBG waa ciyaar royale dagaal ah oo aad ka soo dejisan karto kana ciyaari karto kombiyuutarka Windows iyo moobaylka. Gudaha PUBG, oo kordhiya tirada ciyaartoyga mobilada iyo kombuyuutarka labadaba oo wata cusbooneysiin joogto ah, qof walba wuxuu leeyahay hal ujeedo: inuu badbaado! Ciyaarta, oo loo heli karo sida PUBG PC (soo dejiso) barnaamijka Windows iyo PUBG Mobile (soo dejiso) moobiilka, waxay gaareen xilli 12aad illaa Juun 2021 waxayna heleen 12.1 cusbooneysiin ah. Kala soo bax ciyaarta PUBG hadda si aad ugu biirto dagaalka royale dagaalka. Shuruudaha nidaamka kombiyuutarkaagu ma fiicna? Waad ku raaxeysan kartaa inaad ku ciyaarto PUBG adigoon ku xiiqin ama ku qaboojin PUBG Mobile (APK).
PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS, ama PUBG oo la soo koobo, waxaa lagu qeexi karaa ciyaar badbaado khadka tooska ah ah oo ciyaartoyda siineysa fursad ay ku kulmaan daqiiqado aan la ilaawi karin. Hadda soo dejiso PUBG kuna biir balaayiin ciyaartoy oo ciyaaraya PUBG!
PUBG, oo ah nooca waxqabadka TPS ee aad ka ciyaari karto kombiyuutaradaada, wuxuu siiyaa ciyaartoy xaalad la mid ah filimada Ciyaaraha Gaajada. Meelo la dayacay iyo ilbaxnimo duntay ayaa ina sugaysa ciyaarta, taas oo ka dhaceysa adduunyo-dambeeyaha dambe. Goobaha dagaalka ee dunidan, ciyaartoy kasta waa inuu kula dagaallamaa ciyaartoy kale aag ballaadhan oo furan oo dhererkiisu yahay 8 kiiloomitir oo laba jibbaaran si uu u noolaado una dagaallamo inuu noqdo kan keliya ee ku guuleysta garoonka.
Sidee Loo Ciyaaraa PUBG?
Ciyaaryahan kasta oo u soo baxa fagaaraha dagaalka ee PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS wuxuu ku bilaabayaa halgankiisa badbaadada si isku mid ah. Ciyaartoydu waa inay sahamiyaan khariidada si ay u helaan hub ama qalab. Ka dib markaad ururiso hubka iyo qalabka ku haray meelaha qaarkood, waa inaad ogaataa meesha ay joogaan ciyaartoy kale oo aad u nadiifiso mid mid. Hubka iyo qalabka xaddidan ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in loo dagaallamo gacan ku haynta ilahaas. Ciyaartoydu sidoo kale way tartamayaan waqtiga; maxaa yeelay goobta dagaalka wuu kusii yaraanayaa ciyaartooyda ku haray furimaha dagaalka si tartiib tartiib ah ayay u luminayaan caafimaadkooda.
PUBG waxay bixisaa afar khariidadood oo cabirro kaladuwan leh iyo astaamo dhamaan noocyada ciyaarta: Erangel (8 x 8 km), Miramar (8 x 8 km, Sanhok (4 x 4 km) iyo Vikendi (6 x 6 km). Haddii aad galeyso khariidadan, u diyaar garow dagaal halis ah! Muuqaalka khariidada ayaa ah inuu ka kooban yahay aagag aad u tiro badan oo ciyaartoyda ka heli doona qalab. Meelahan waxaa had iyo jeer ku badan ciyaartoy doonaya inay is dilaan, goobaha Sanhok iyo Vikendy, bakhaarka PUBG Loot, labadan goobood aad bay u yar yihiin, marka goobaha wax lagu kaydsadaa aad bay u sarreeyaan, way isu dhow yihiin. Sanhok waxaa ku yaal Bootcamp, Pai Nan, Paradise Resort, Ruins, Docks iwm. Meelo lagu taliyay khariidada Vikendy waxaa ka mid ah Podvosko, Dobro, Mesto, Movatra, Goroka, Villa, Castle.Waxyaabaha u gaarka ah khariidada Miramar map ayaa ah inay leedahay aag ballaadhan oo meelaha ay aad uga fog yihiin. Waa inaad si wanaagsan u maamushaa waqtiga si aad u gaarto meel cayiman oo aan khasaaro ku jirin. Laakiin ka hor intaadan galin goobaha bililiqada PUBG, u diyaar garow caqabadaha adag.
Shuruudaha Nidaamka PUBG
Marka, waa maxay shuruudaha nidaamka ugu yar iyo kuwa lagula taliyay ee lagu ciyaaro PUBG? Shuruudaha nidaamka ugu yar ee PUBG waa:
Nidaamka Howlgalka: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
Kaadhka Fiidiyowga: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
Shabakad: Xiriirinta Shabakadda Broadband
Kaydinta: 30GB oo bilaash ah
Kumbuyuutar kombuyuutar ah oo wata qalabkan, waxaad ku ciyaari doontaa PUBG meelaha ugu hooseeya, maahan goobaha ugu fiican ee khibrada ciyaaraha. Shuruudaha nidaamka lagula taliyay ee PUBG waa:
Xusuusta: 16GB RAM
Kaadhka Fiidiyowga: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
144fps, shuruudaha nidaamka lagula taliyay ee loogu talagalay ciyaaraha tartanka waa:
Xusuusta: 32GB RAM
Kaadhka Fiidiyowga: NVIDIA GeForce GTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700
Shuruudahaan nidaamka waxaa lagula talinayaa waxqabadka ugu wanaagsan ee fps sare iyo kormeerayaasha heerka cusbooneysiinta sare ee loo yaqaan kormeerayaasha ciyaaraha.
Cabirka Faylka: 1945.60 MB
Horumar: Bluehole, Inc.